Momba anay - Shenzhen Jinjiang Hi-Tech Co., Ltd.
Shenzhen Jinjiang Hi-Tech Co., Ltd. dia fanamboarana manokana amin'ny fikarohana, famokarana ary fivarotana vokatra fanaraha-maso ny bibikely, ary nanomboka namokatra vokatra tamin'ny 2008. Ankehitriny, ny fangatahana sy ny ahiahy manerantany manerantany momba ny fifehezana ny bibikely sy ny olana ara-tontolo iainana dia mitombo. Izahay dia mikendry ny ho tonga mpamatsy matihanina indrindra sy mpamatsy rojom-pamokarana vokatra fanaraha-maso ny bibikely, noho izany dia hitohy amin'ny fahitanay ny manolotra vokatra fanaraha-maso peste avo lenta sy serivisy tsara indrindra hiadiana amin'ny iraka ampiasain'ny orinasanay: Ny fanadiovana ny tontolo iainana olombelona ho hahatratra ny fifandanjan'ny rojolojika biolojika.
Omifantoka amin'ny kalitaon'ny vokatra sy ny fahafaham-po ny mpanjifa ny orinasanao amin'ny fotoana rehetra, ary koa hentitra amin'ny fenitra kalitao sy ny fandefasana entana, mandritra ny taona maro, noho ny fikarohana tsy tapaka, ny fampandrosoana, ny fanatsarana ary ny fanangonana traikefa, ny orinasanay izao dia afaka manome vokatra premium ho an'ny mpanjifa, ary koa fahazoana valiny tsara. Ankoatry ny famatsiana ny vokatra ho an'ny tsenanay anatiny, dia mivarotra sy manatitra ny vokatray any amin'ny firenena maro eran'izao tontolo izao izahay, toa an'i Amerika, Alemana, UK, Aostralia, Nouvelle Zélande, Rosia sns.
WManana atrikasa famonosana iray izahay ao amin'ny orinasanay miaraka amin'ny faritra mirefy 900m2, ao anatin'izany ny milina famonosana 9 sy mpiasa 50 eo ho eo. Momba ny vokatra plastika, ny atrikasan'ny tsindrona dia mitazona 810m2, nifanaraka tamin'ny milina fanindronana 13, ao anatin'izany ny masinina 5 amin'ny 80 taonina, 3 ny milina ao amin'ny 50 taonina, 3 ny milina 160 taonina, 2 ny milina 130 taonina ary ny mpiasa 25. Hatramin'ity taona ity, ny milina fanindronana rehetra dia namboarina tanteraka tamin'ny manipulator, izay afaka miantoka ny kalitao, ary koa mamonjy vola mandritra izany fotoana izany. Misy ihany koa ny atrikasa fanaovana hajia iray, miaraka amin'ny velaran'ny 3000m2, izay manana mpametaveta, mpamono haingam-pandeha haingam-pandeha, isa. control puncher, mpiasa eo amin'ny 20. Ny orinasanay dia mamokatra sy mivarotra vokatra famonoana bibikely isan-karazany izay ampiasaina amin'ny fifehezana ny bibikely amin'ny toe-javatra isan-karazany.
We dia orinasa manerantany, ny vokatra varotra mafana indrindra ataonay dia ny fandriky ny totozy plastika, ny toeram-pihinanan-jaza, ny fandrika, ny fandrika mololo, ny vokatra fiarovana ny zavamaniry, ny mpamongady bibikely elektronika, ny lakaoly laka-bibikely, ny fandrika amin'ny lakaoly totozy, ny fantsika vorona ary ity andiana bibikely fanaraha-maso vokatra. Ny orinasa dia manana ekipa sangany manambatra fampandrosoana, famokarana ary varotra matihanina, ary manome serivisy manara-penitra sy matihanina amin'ny serivisy mialoha, varotra ary serivisy aorinan'ny varotra. Mifanaraka amin'ny fironan'ny tsena ny orinasa, afaka mahita ny filan'ny mpanjifa, mampiditra vokatra vaovao ary manaraka ny fotoana.
Amin'ity vanim-potoana feno fanararaotana sy fanamby ity, na dia manana fahaiza-manao ivelan'ny seranana tsara aza ny orinasa, dia nanitatra tsikelikely ireo fantsom-barotra amin'ny Internet izy ireo, manaraka ny fitsipiky ny fiaraha-miasa amin'ny kalitao avo sy vidiny ambany, tombontsoa iraisana ary fiaraha-miasa mandresy. Ny orinasa dia hitondra vokatra mora vidy ho an'ny mpiara-miasa lehibe. Avelao ny mpividy rehetra hividy sy hivarotra tsy misy ahiahy.